आज सुन ८ महिना यताकै सस्तो, हे’र्नुहोस् कतिमा कारोबार भइरहेको छ?
Homeसमाचारआज सुन ८ महिना यताकै सस्तो, हे’र्नुहोस् कतिमा कारोबार भइरहेको छ?
February 17, 2021 admin समाचार 5189
सुनको मूल्यमा भारी गि’रावट आएको छ । बुधवार सुनुको मुल्य ८ महिना यता’कै सस्तो भएको हो । एकैदिन तोलामा एक हजार एक सय रुपैयाँ मुल्य घटेको ८ महिना यता यो पहि’लो पटक हो । बुधवार सुनको मुल्य ९० हजारभन्दा तल्लो अंकमा पुगेको छ । यसअघि सुनको भाउ हाल’सम्मकै उच्च प्रतितोलामा १ लाख ३ हजार ५ स’यसम्म पुगेको थियो ।
महासंघले बुध’बारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । मंगलवार छा’पावाल सुन ९० हजार ९ सयमा का’रोबार भएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन १ हजार ५० रुपैयाँ घटेर ८९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा झरेको महा’संघले जनाएको छ ।
मंग’लबार तेजाबी सुन ९० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । मंगल’बारको भाउभन्दा २० रुपैयाँ सस्तो भएर प्रतितोला १ हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार मूल्य तोकि’एको छ ।
कोरोना कह’रका कारण सरकारले सुन आयातको कोटा घटाएका कारण ब्यवसायीले सुन किन्न पाएका छैनन् । जसका कारण व’जारमा सुनको उच्च अभाव छ । बजारमा कच्चा सुनको चरम अभाव भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महा’संघले जनाएको छ ।
दैनिक १५ किलोको दरले दैनिक आ’यात हुनुपर्ने सुन अहिले १० किलोमा झरेको छ । वजारमा सुनको हाहाकार भएपछि ब्यवसायीहरुले सर’कारलाई कोटा बढा’उन माग गरेका छन् । कोरो’नाका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने भन्दै गत चैत १६ गतेदेखि सुनको आयात कोटा प्रतिदिन १० कि’लोमा झारेको थियो । – इ ताजा खबर बाट
साउथ अ’भिनेत्री कीर्ति सुरेश पछिल्लो समय विवाहको समाचारका कारण चर्चामा छिन् । उनले छिट्टै म्युजिक निर्देशक अनिरुद्ध रविचन्दरसँग विवाह गर्दैछिन् । दुवै लामो समयदेखि एकअर्काेको नजिक रहेका थिए । विवाहको विषयमा कीर्ति र अनि’रुद्धले भने अहिलेसम्म आधिकारिक धारण सार्व’जनिक गरेका छैनन् ।
कीर्तिको फ्यान फ्लोइङ पनि धेरै रहेको छ ।कीर्ति र अनिरुद्धले एकसाथ रेमो, थाना सेर’धाकुटम र अगयाथवसी जस्ता फिल्ममा काम गरेका छन् । यी फिल्म पछि यी दुबै एकअर्काेको डेटमा रहेको समाचार बाहिर आएको थियो । कीर्तिले कयौ साउथ फिल्ममा काम गरेकी छन् । जसमा तमिल, तेलगु र मलया’लम भाषामा पनि रहेको छ । यसको अलवा उनी छिट्टै सुपरस्टार महेश बाबुको साथ फिल्म ‘सरकारु वारी पाटा’मा देखिनेछिन् ।
March 23, 2021 admin समाचार 3774
भान्छामा अत्य’धिक उपभोग हुने प्याज साउनदेखि आठ महिनामा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आ’यात भएको छ। त्यो भनेको ७१ हजार ३ सय ४० टन हो। यही अव’धिमा विदेशबाटै १ अर्ब १२ करोडको १० हजार ३
August 30, 2021 admin समाचार 4412
‘मलाई माफ गर छोरी: ”बाबा आउनु भन्दै तिमी रोइरहेकी थियौ तर म आउनै सकिनँ’
October 30, 2021 admin समाचार 4456
इजरायली हवाई आ’क्र म’णमा ध्व’स्त भएको घरभित्र पुरि`एकी गाजाकी छ वर्षीया बालिकाको सात घन्टापछि सकुशल उ’द्धार गरिएको छ। सुजी एस्कुन्ताना नामकी ती बालिका`लाई अहिले गा’जाको सबैभन्दा ठूलो अस्प`तालमा भर्ना गरिएको छ। गत आइतबार इजरायलले गरेको
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220867)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216796)